Igwe Igwe Igwe Igwe - Ikkaro
Un igwe oku bụ ihe eji arụ ọrụ, nke na-enye ohere ịnweta ike igwe site na Ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri compressible na-agafe na ya.
Vidiyo magburu onwe ya na arụmọrụ nke igwe 4-stroke. A na-ahụ usoro nke 4, ịgba ntụtụ, mkpakọ, mmụba na ikpochapu, yana ọrụ nke valves na pistons.
Ọ dị obere,
Otu esi achikota moto
Otu esi achikota igwe 4-stroke. Dị ka vidiyo na-arụ ọrụ na engine, ọ na-enye ihe ọmụma, ọ bụ ezie na ọ kachasị mma ịnwe igwe ochie, mebie ya ma tinye ya ọnụ. Otu n'ime omume ndị kachasị mma m meworo na ọrụ m niile.
Iwuli Igwe Igwe Steam A Na-arụ n'ụlọ
Via ihe nlere nke ndi Argentina
Achọtala m ntuziaka ndị a banyere otu esi esi rụọ igwe ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma.
A na-agbanye pistin na nchara ọla
Ngwongwo ọla kọpa nke a na-eji gas na hexagonal (otu n'ime flats m na-eji dị ka valve engine) nke isi cylinder jiri mkpụrụ ego ọla kọpa ejiri tin
Jiri mpempe aluminom heatsink dị ka nkwụsị n'etiti etiti cylinder na ihe nkedo cylinder.
Otu mpempe ọla nke ejirila ihu anọ gwuchaa nke na-ewepụ ya na ngọngọ nke eletriki bụ mpempe akwụkwọ nke na-akwado silinda ma na-ahụ maka inye silinda uzuoku
Igodo nke m na-esi na gas cylinder maka ikuku ikuku dị ka ihe mgbochi maka igwe mmiri nke m ga-ejikwa servo.
Lee ederede zuru ezu
Eolipíla ma ọ bụ Aeolus nke Heron
La Eolipilla ma ọ bụ Aeolus nke Heron a na-ewere dị ka Igwe ọkụ izizi n'akụkọ ihe mere eme.
Onye chepụtara ya bụ onye injinia na mgbakọ na mwepụ nke Greek Heron nke Alexandria (Okenye ahụ) site na narị afọ nke mbụ AD Heron ka a na-ahụta dị ka otu n'ime ndị kacha echepụta ihe niile n'oge ochie, ihe ọmụmụ ya na ọrụ ya bụ ihe nnọchianya nke oge ndị Hellenistic.
Nke kacha mma mara ya mepụtara Isi iyi Heron na Eolipila (aelópilo ma ọ bụ aélópila) nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote. Na mgbakwunye na otutu ọmụmụ banyere mgbakọ na mwepụ, optics na pneumatics nke ọ bụ onye mepụtara.
La Aeolipila, A na-akpụ ya site na oghere oghere nke tubes abụọ curved na-esi na ya apụta nke alụlụ mmiri na-apụta ma mee ka ọ gbanwee.